Don Good, onye isi oche nke Waikato Chamber of Commerce, katọrọ gọọmentị n'ihi na mba ahụ enweghị ọrụ ndị a ga-akwụ ụgwọ ozugbo na Waikato, ebe ndị ọrụ ngo ndị nkịtị na-eche ka akwado ọrụ a.
Gọọmenti ekwuputabeghị ọtụtụ ọrụ shọvelụ ụwa. Kaosinadị, Waikato City Council tụụrụ gọọmentị etiti aro iri abụọ na atọ n’ọnwa Eprel, na-akpata ngụkọta ijeri US $ 2.8.
Edere ihe dị ka nde $ 150 maka Waikato, nke gụnyere ọrụ shọvel-njikere dị ka nkwalite nke Hamilton Gardens na akụrụngwa ịnyịnya ígwè n'obodo ahụ dum.
N'akwụkwọ ozi o degaara ndị otu Chamber of Commerce, Goode kwuru na gọọmentị na-egbu oge ịkpọsa oru ndị a ma tufuo ụzọ ọrụ ha iji gbasaa mgbasa mgbasa Cambridge na Piarrell na Waikato Expressway na South Link.
“Gini ka gọọmentị na eme na Hamilton City Council, Waipa District Council na ndị ọzọ niile nnukwu'shovel nkwadebe’ oru ngo tụpụtara na Waikato District Council ọnwa ise gara aga?
“N’ejighi ikwenye, ha bụ okwu mmụta okpukpe dabara adaba n’oge ahụ, na-enye ndị ọkaibe Wellington dị oke ọnụ ohere ịpụta akụkọ banyere ọnụ ụzọ, nke na-achịkọta uzuzu ugbu a n’elu ụlọ ọrụ gọọmentị.”
“Anyị ghọtara àjà ndị a chọrọ iji nweta Covid-19. Anyị bụ akụkụ nke otu nde mmadụ 5 ma anyị chụrụ àjà. Mana ọnwa ise iji mepụta atụmatụ iji nyere aka napụta akụ na ụba dị ogologo.
Zọ iji kwadebe shọvelụ ahụ dị mfe. Anyị akpọchibidoro anyị, ndị isi anyị kwesịrị itinye ego na ọrụ ndị na-enye akụrụngwa ọtụtụ ọgbọ, nke na-ewetara ọtụtụ mmadụ ọrụ.
“Nke a ga-eme ka ndị mmadụ jide n’aka. Ego ahụ ga-etinye ego n'ime akụ na ụba, yana ego dị n'aka ga-enye ndị mmadụ nchekwa. O doro anya na nchebe, ị nwere ike inye ndị mmadụ obi ike.
“Obi dị anyị ụtọ na a gosipụtara na anyị ezighi ezi. Obi dị anyị ụtọ ịnụ ọkwa dị mkpa echi na akwadoro ego maka ụfọdụ nnukwu ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ịrụ ọrụ. ”
"Mpaghara Waikato na-akpọ oku maka ntụkwasị obi n'ọdịnihu ka anyị wee daa n'azụ na 2020. Anyị na-arịọ ndị isi anyị ka anyị duga: Ekwela ka anyị daa."
Ọ bụ ezie na atụmanya Good dị njọ, nsonaazụ nke nyocha ụlọ ọrụ na-ewu ihe na 2020 na-egosi na site na "Nkwekọrịta Buildinglọ Ewu", Sanshui Reform na New Zealand Infrastructure Commission amalitela inwe mmetụta na-eme ka mmiri sie ike na ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-ahụkwa ihe ọdịnihu.
Ndị ọrụ ngo na-agbanwe agbanwe na-ewere usoro iji dozie nsogbu ha na-adịte aka na ntinye ego, enweghị mgbagwoju anya na usoro ọrụ, na kagbuo / ịgbatị nkwekọrịta.
Dika ndi ochichi obodo na ndi etiti obodo choro 75% nke ndi ahia ahia, ndi oru ngo n’atu anya na nkwalite mmekorita nke New Zealand n’oge na-adighi anya inwe mmetuta oma, 69% n’ime ha na-atu anya mmetuta oma n’ime afo ato, na akuko ngwa ngwa ga enyere aka imezi Mbelata mmefu gọọmentị mpaghara n'ihi mmetụta Covid-19 na mmefu ego.
Peter Silcock, onye isi ndị isi na New Zealand Civil Construction Contractors kwuru, sị: "N'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba siri ike, ọtụtụ ndị ọrụ ngo nwere ntụkwasị obi na nkwụsi ike ha ma nwee olile anya ijigide ma jigide ndị ọrụ ha na-arụrụ ọrụ n'ọnọdụ ụfọdụ."
"Ndị ọrụ ngo ga-eme ihe iji hụ na azụmaahịa ha nwere ike ịnagide Mbelata oge dị mkpụmkpụ na ọnwa ole na ole sochirinụ, tupu ọrụ ndị ezubere maka afọ ise na-abịa.